Hetsika ifotoran'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany "rebuilding.travel" efa any amin'ny firenena 80
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Hetsika ifotoran'ny Indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany “rebuilding.travel” efa any amin'ny firenena 80
Hetsika ifotoran'ny Indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany “rebuilding.travel” efa any amin'ny firenena 80
Aprily 29, 2020
Fanarenana.travel dia manome fantsona ho an'ny mpitondra ambony eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany hifaneraserana amin'ireo mpandray anjara mavitrika amin'ny toerana tsy ara-potoana. Izany rehetra izany dia ny fitadiavana vahaolana azo tanterahina amin'ny famerenana indray ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany amin'ny fotoanan'ny valanaretina Coronavirus.
Taorian'ny nanambarana ity #rebuildingtravel ity dia vao herinandro lasa izay, ity hetsika zotram-pifandraisana ity dia efa mpandray anjara avy amin'ny firenena 80 amin'ny kaontinanta rehetra.
Fanarenana.travel dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny tetik'asa nahomby tamin'ny tetik'asa Hope Hope Travel nataon'ny Birao fizahantany afrikanina. Rebuilding.travel dia natomboka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Etazonia, Belzika, Seychelles ary Indonezia monina Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany
Ny mpanohana amin'izao fotoana izao dia ahitana anarana marika toa an'i Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, Hon. Edmund Bartlett, minisitry ny fizahantany Jamaica, HE Hon Najib Balala, sekreteran'ny fizahan-tany, Kenya, Konrad Mizzi, minisitry ny fizahan-tany teo aloha Malta, Hisham Zazou, minisitry ny fizahan-tany teo aloha, Egypt, Alain St. Ange, minisitry ny fizahan-tany Seychelles teo aloha, Tom Jenkins, CEO ETOA, Louis D'Amore, mpanorina Ivotoerana Iraisam-pirenena misahana ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, Dhananjay Regmi, birao mpitantana ny fizahan-tany Nepal, Vijay Poonoosamy VP Etihad Airways teo aloha, ary maro hafa. Ny mpandray anjara dia misy mpitarika avy amin'ny orinasa lehibe sy lehibe eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, fikambanana, oniversite, consultant ary mpanao gazety.
Fikambanana / mpiara-miasa tsy miankina
Task Force / Birao
Rebuilding.travel dia fikambanana tsy ara-dalàna, ifotony ary hovolavolain'ireo mandray anjara mavitrika.
"Raharahan'ny tsirairay io toe-javatra io ary ny ezaka ataon'ny ekipa eo anelanelan'ny mpitondra efa napetraka sy ny vao misondrotra ihany no mahomby", hoy i Juergen Steinmetz, filohan'ny ICTP. Steinmetz koa dia CEO an'ny TravelNewsGroup ny mpanonta eTurboNews. Nanampy izy hoe: “Misy hetsika sasany azontsika atao hanomanana ny fananganana indray ny orinasanay. Betsaka ny zava-misy hafa tsy voafehintsika. Izahay dia tsy mikasa afa-tsy ny mifantoka amin'ny olana mety ho vitan'ny vondrona misy antsika sy andraisany soa. ”
Izay voakasik'izany dia afaka miditra ao amin'ny #rebuildingtravel amin'ny https://rebuilding.travel/register/
Kiobà - horohorontany mahery vaika 6.6 Haiti voarakitra
Tsy misy mpizahatany alemana farafaharatsiny hatramin'ny 15 Jona